WARBIXIN: Shir dhexmari lahaa Madaxda DF iyo D/gobaleedyada oo baaqday & Maxaase Caqabad ku noqday! – Puntlandtimes
WARBIXIN: Shir dhexmari lahaa Madaxda DF iyo D/gobaleedyada oo baaqday & Maxaase Caqabad ku noqday!
September 17, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Shir uu horey ugu baaqay Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, loogana hadli lahaa arrimaha siyaasadda iyo Amniga Qaranka ayaa maanta baaqday, kaas oo ay ka qeybgali lahaayeen Madaxda dawlad gobaleedyada Faderaalka ee dalka.
Shirkan waxaa looga hadli lahaa Ammaanka, Siyaasadda iyo xariirka labada dhinac, waxaase u baaqday markii ay madaxda dawlad gobaleedyada Faderaalku diideen in ay ka qeybgalaan, ilaa la helayo goob amaan ah iyo damaanad qaade rasmi ah oo ku wajahan waxyaabaha laga wada hadlayo.
Sidaas oo kale madaxda dawlad gobaleedyadu waxay codsadeen in gabi ahaanba dawladda Faderaalku ku dhawaaqdo in ay faragalinta siyaasadeed ka joojinayso dawlad gobaleedyada, isla markaasna ay waajib tahay in la dhawro nidaamka dawladnimada ee dalka.
Ra’iisylwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay jeediyey khudbad gaar ah, una muuqday mid ka xun talaabada ay dawlad gobaleedyadu qaadeen ayaa sheegay in aysan marnaba yeeli doonin in gacan 3aad ay qeyb ka noqoto siyaasadda Soomaalida.
Mr, Kheyre ayaa sheegay in ay Muqdisho amni tahay, xili la beegsanayo Xildhibaanada iyo xarumaha maamulada degmooyinka, cabsina laga qabo isku haleynta ammaanka caasumada Soomaaliya, waxaana uu sheegay in gacanta 3aad aysan marnaba Ajnabi aqbaleynin.
Xariirka Xukuumadda Faderaalka iyo dawlad gobaleedyada ayay hakiyeen Golaha Iskaashiga dawlad gobaleedyadu, ka dib markii ay ku eedeeyeen Xukuumadda Faderaalka in ay garab martay waajibaadkii Dastuuriga ahaa, loona baahan yahay in mar kale la helo damaanad rasmi ah.
Tubta Amniga Qaranka ee horey ay uga wada hadleen dhinacyada waxaa ku qeexnaa Jaantusyo muujinaya hanaanka la wareegida Ammaanka dalka, Isku dhafka ciidamada xooga iyo qorshaha bixinta Saadka iyo Agabyada ciidan ee dawlad gobaleedyada lasiinayo, taas oo ay ku eedeeyeen madaxdu in aysan waxba ka fulin Villa Soomaaliya.